यौ’न असन्तुष्ट पुरुषहरुसँग सम्बन्ध बनाउने सुन्दरी ! - Sagarmatha Online News Portal
यौ’न असन्तुष्ट पुरुषहरुसँग सम्बन्ध बनाउने सुन्दरी !
एजेन्सी । पेशाले उनी फाइनान्सियल कन्सल्टेन्ट हुन् । उनको उमेर ५० वर्ष पुगेको छ । उनी बेलायतमा बस्छिन् ।
तर, उनी तिनै पुरुषहरुको साथी बनिन्, जो आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा यौनमा खुसी हुन सकेनन् । तिनै बेखुस श्रीमान्लाई उनले खुसी बनाउने काम गरिन् । उनी यस्तो पार्टनरको खोजी डेटिङ साइटबाट गर्छिन् जो आफ्नो श्रीमतीवाट शारीरिक रुपमा खुशि हुन नसकेका मात्र हुन् ।
उनी मोडलिङ पनि गर्छिन् । उनले भनेकी छिन्, उनीसँग जोडिन आउने अधिकांश पुरुषहरु आफ्ना पत्नीसँग शारीरिक रुपमा खुसी छैनन् । सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । अहिले उनलाई के कुराले खुसी बनाएको छ भने, ति असन्तुष्ट पुरुषहरु उनको सम्पर्कमा आएपछि खुसी भएका छन् ।
पूर्व मोडल वेनेथ लिलाई आफ्नो सम्बन्धका लागि कुनै पछुतो छैन । किनभने उनले श्रीमान् श्रीमतिलाई एकसाथ बस्ने वातावरण बनाइ दिइरहेकी छिन् । कतिपय अवस्थामा पत्नीहरु व्यस्त हुन्छन् । बच्चा जन्माउछन् । यस्तो बेला पुरुष एक्लै हुन्छ । यसरी एक्लै भएका पुरुषका लागि कसैको साथ चाहिन्छ । तर, उनीहरु आफ्नी पत्नीलाई पनि छाड्न चाहँदैनन् । त्यस्तै पुरुषलाई लिले सहयोग गर्छिन् ।
लिले धेरैजसो पार्टनर आफ्नो डेटिङ साइटबाट प्राप्त गर्छिन् । यो साइट म्यारिड व्यक्तिका लागि म्याच मेकिङ गर्नका लागि संचालनमा रहेको छ । यस साइटमा जोडिने धेरैजसो पुरुषहरु धनाढ्य तथा बिजनेस म्यान हुन्छन् ।
नायिका साराले फोटोग्राफरलाई ‘नमस्ते’ मेरो पोज होइन भनेपछि …